Kuhle Izintaba Qala Amaphuzu EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle Izintaba Qala Amaphuzu EYurophu
Ukubiza wonke ama-junkies we-adventure nabafunayo! Ngabe ufuna ukwazi ukuthi imaphi amaphuzu wokuhamba izintaba ahamba phambili nokuthi ungafika kanjani lapho ngesitimela? Khona uku endaweni efanele!
KAKHULU izintaba QALA AMAPHUZU: EZINHLANU Terre KOGU Trail - ITALY
Nokuhamba Cinque Terre ingenye izinto best ukuyenza e-Italy, futhi omunye Kuhle izintaba ekuqaleni amaphuzu. izintaba zayo emizileni yilezi ziphakathi kwezinhle kakhulu eYurophu futhi uma ungumuntu lover ongaphandle noma nje umuntu ufuna Zivocavoce phakathi ohlehlela ukudla Italian, kungenye yezindlela ezinomvuzo kakhulu zokujabulela i-Italy ugu oluhehayo.
Kodwa uma sihambe le Cinque Terre udinga ukuza lelungiselelwe. Ukusuka ekuqondeni umzila nobunzima ukuba ukupakisha izinto ezilungile futhi uya ngesikhathi efanele ngonyaka, ngokuba unolwazi kuhle umehluko phakathi ukushaywa ezishintsha ukuphila kwayo kanye slog wearying.
Indlela uthole khona ngo zemininingwane:
• Uma e-Italy, ngosizo Gcina Isitimela, isitimela namanje indlela engcono kakhulu ukufinyelela Cinque Terre. Kukhona isitimela lendawo, le Cinque Terre Express isitimela, okuyisona ngasogwini phakathi iziteshi Centrale La Spezia futhi Levanto. It uyama nhlobo emadolobheni amahlanu (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), futhi uzodinga ukulithatha ukuhambisa phakathi kwazo uma ungumuntu endaweni (ngaphandle kokuthi ukhethe sihambe phezu emizileni avame inselele). Kusukela ngomhla ka-ihlobo 2016, izindleko Cinque Terre Express € 4 uhambo ngamunye. Phakathi off-inkathi, ngokuvamile kusukela November kuya kuMashi, izindleko lehla € 1.80. Lokhu isitimela ayinikezi zihlalo Phendla.
• Fika kusukela Florence noma Rome: Kunezindlela izitimela ezimbalwa ngqo ngosuku kusukela Firenze Santa Maria Novella isiteshi La Spezia Centrale; abanye zidinga ukuthi ukushintsha izitimela e Pisa. Amanani aqala ku- € 13,50. Ngezinye La Spezia, ziyashintsha zibe Cinque Terre Express.
KAKHULU izintaba QALA AMAPHUZU: Eagles UHAMBE - AUSTRIA
I Eagle Hamba yakhiwa 23 izigaba exhumene, okuyinto ukulandela indlela umoya-ukuthatha ngokusebenzisa Tirol. The Best izintaba ekuqaleni amaphuzu esifundeni, izigaba eziningi kungenziwa kalula ifinyelelwe ikhebula imoto futhi igcwaliswe njengoba egcwele- noma uhhafu wosuku uhambo. Singathanda ukwethula wena kwesigaba esizithandayo kwalesi blog.
Kungakhathaliseki uhlela ukushaywa usuku noma multi-ngesonto adventure kule izintaba, uzothola Eagle Hamba khona isikhalo esikhulu isipiliyoni ongaphandle. It inikeza amathuba engenakuqhathaniswa ukuhlola, nakho, bese uxhuma nemvelo.
Khetha wethu eziphezulu: Lake Zireiner See
Ukuhamba uhhafu wezinsuku zabahambi ngezikhathi ezithile. Kusukela Kramsach e Lower Inn Valley, thatha chair lift endlini Sonnwendjoch. Ukuhamba iDemo kuholela enhle Zireiner echibini, okuyinto iseningizimu isigodi cishe 1,800-amamitha ngaphezu kolwandle - nendawo enkulu luphole ku esishisayo ihlobo izinyanga. Zihamba siyaqhubeka Zireiner Alm nedlelo (1,698m) ngaphambi kokubuyela phezulu chair lift, ngokuvumela you gibela emuva behlele Inn Valley.
Kulula ukukwenza travel kusuka UK kuya Austria ngesitimela. Ungaya kusukela London eVienna, ISalzburg noma i-Innsbruck ngosuku olulodwa ngo isitimela sejubane elisheshayo. Noma uthathe sekhefu Eurostar evela eLondon Brussels, isivinini esikhulu sikaThalys isitimela ukuze Cologne, kanye Nightjet kakhulu olele isitimela ukuze Innsbruck, Linz, noma Vienna ngobusuku obubodwa. Uma kukhona, ngifike Tirol Kulula nge network yayo olunzulu yomphakathi ezokuthutha. Kulula ukuhamba emhlabeni esifundeni usebenzisa izitimela. Uhamba abafisa ukuthatha ku ingxenye noma lonke Lokhozi Hamba angafinyelela ekuqaleni futhi isiphetho amaphuzu esigabeni ngasinye usebenzisa ezokuthutha zomphakathi wendawo.
KAKHULU izintaba QALA AMAPHUZU: ICAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
ngesiNgisi I Camino yaziwa ngokuthi iNdlela St James. Yonke imizila yokuhambela eCamino iholela eSantiago de Compostela njengoba kulapho izinsalela zeSt James, (Santiago), Kwatholakala ekhulwini lesishiyagalolunye. Lolu hambo lwaludumile ngomhlaka 10, 11th, nangekhulu le-12 leminyaka wabe esenqaba kancane ukuthandwa.
Ngekhulu lama-20, cishe akekho wayehamba yimiphi imizila. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka yama-1970 nasekuqaleni kwawo-1980 umzila waba nesithakazelo kwabambalwa. Baqala ukubhala futhi Imebhe imizila futhi.
Ekhulwini lama-21, umbono walokho okubizwa ngokuthi uhambo mhlawumbe bezitolo. Nokho, ukuzikhandla kokuhamba inyanga yonke futhi unqanyuliwe kumadivayisi wanamuhla kukhulula kakhulu.
Sarrià edolobheni olufuna pilgrim, njengoba kufike lapho abangasebenza khona yenziwa Camino de Santiago. Phakathi kwabangaphezu kuka- 300,000 ama-pilgrim ukuthi abahambanga Santiago de Compostela e 2017, abanye 60% ayekhethe ulandele Camino Frances. Futhi ngaphezu 80,000 wabo wakhetha Sarrià njengoba starting yabo phuzu. Isizathu esiyinhloko sokukhetha iSarria ukuthi sinikeza ibanga eliphansi elidingekayo kubahambi ukuba banikezwe iCompostela (isitifiketi pilgrim sika). Ibanga Santiago ingambozwa ngezigaba ezinhlanu nje futhi inama inani elikhulu ongakhetha yokuhlala kanye nezinsiza ukuze ama-pilgrim. Sarrià Kulula ukuthola on izithuthi zomphakathi kusukela izingxenye ezahlukene Spain.
Kanjani ukuze uthole Sarrià ngesitimela:
Isitimela ingenye kakhulu ukhululekile ongakhetha uma usohambeni kusuka Madrid Sarrià. Kukhona oqondile uxhumano esizosishiya Chamartin sesitimela eMadrid kabili ngosuku, nge uhambo isikhathi cishe amahora ayisithupha. Ngaphezu kwalokho, kukhona izitimela ahlukahlukene ukuthi ukuxhuma Madrid ne Santiago de Compostela futhi Lugo, emadolobheni Galician okuyindawo Kulula kakhulu ukuthola Sarrià, nokuxhumana eziningana ngqo nsuku zonke. Ungakwazi uthintane zonke izikhathi kanye amaza ngokuxhumana Renfe, inkampani yeSpain kazwelonke isitimela.
Isitimela futhi ukhetho best lapho uhamba kusukela Barcelona. Kukhona izixhumanisi nsuku zonke ngqo kusuka Barcelona (noma ungashintsha nganoma Monforte de Lemos), nge izitimela emini (uma hlanganisa Ave noma ngesivinini isitimela Indlela ende ongakhetha) nezitimela ngobusuku obubodwa. Isilinganiso uhambo isikhathi kusuka Barcelona 12 amahora. Isitimela esisuka Barcelona ukuba Sarrià futhi uxhuma namanye amadolobha amakhulu kuhlanganise Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, futhi Leon.
Kusukela Santiago de Compostela, Renfe inikeza izitimela ezimbili nsuku zonke ukuze Sarrià: eyodwa ngesikhathi 5 pm (amahora amabili 'uhambo isikhathi); futhi ngaso 6.07 pm (nge uhambo esikhathini cishe amahora amane).
Kusukela Lugo, le isitimela futhi kuyindlela ekhululekile kakhulu. Renfe inikeza eziningi ukuxhumana nsuku zonke ukuthi uzothola ukuthi Sarrià kusukela Lugo e 30 amaminithi.
KAKHULU izintaba QALA AMAPHUZU: WESTWEG Trail - EJALIMANE
Kungashiwo ukuthi umzila Westweg kusukelaphi zonke German elide izintaba. Yaba indlela yokuqala esiqokiwe inhlobo yayo emuva 1900. Kusuka lapho, umzila selingaphezu ukumboza ibanga 177 amamayela (285 amakhilomitha) - ukuqala ePforzheim enyakatho kuphele eBasel eningizimu.
Ngokungafani Mittelweg kanye Ostweg, the Westweg kukuthatha ikakhulukazi ngokusebenzisa entshonalanga yezintaba. Futhi njengoba uya, wena ofakazi ukwehluka kwemvelo ngobukhulu German ongaphakeme Ukhahlamba. I obukhulu fir nesihlahla sonwele amahlathi. Yilokhu okwenza entabeni isukela igama layo, the expanses treeless nasezintabeni ezisenyakatho Black Forest. Epholile amachibi entabeni, -panoramic rock crests, izigodi glacial, futhi izintaba.
Iphakathi, uzoba ukukhuphuka iziqongo eziphakeme kunazo ngokuphindaphindiwe. Wena sihambe phezu ithafa Hornisgrinde futhi uvakashele Belchen kanye Hochblauen. Jabulela ekubukeni Schliffkopf futhi zululeka Yokulila okusezingeni eliphezulu emhlabeni Hohloh. Iphuzu kweqiniso eliphezulu ukushaywa yakho, kunjalo, kuyoba ngommango Feldberg. Intaba ephakeme kunazo e iBlack Forest.
Kanjani ukuze uthole Westweg ngesitimela:
Iningi izintaba elula kungenziwa behlukana e amabanga ukulawuleka. Lokho kungenxa yokuthi izindawo eziningi kanye emizileni izintaba kungaba safinyelela kahle ngesitimela. usizo Lukhulu uhlela ukushaywa kuyinto ibalazwe jikelele mahhala we Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Ibonisa yonke imizila yezitimela neyamabhasi yeKONUS esifundeni nangaphesheya.
Ngaphezu kwalokho, imiphakathi eminingi inezingane eziyishumi amathiphu esikhethekile nokuhamba izinkambo usuku uhambo I-KONUS yabo izivakashi. Uma uhlela ukuhlala isikhathi esijana kungase kube usizo ukuba uthole SchwarzwaldCard kanye. Leli khadi kuyinto utshalomali omuhle uma usebenzisa izaphulelo exhunywe kwi-ikhadi uye wakwenza ngokuzimisela.
Ukulungele agqoke izintaba yakho amabhuzu futhi ujabulele ezinye izintaba nemvelo? Bhuka isitimela sakho kungakapheli imizuzu kanye ne CHA izimali esingezelelweko Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#Kuzonyuka #Izintaba #Izintaba #imizila longtrainjourneys trainjourney amathiphu isitimela